Ho iray amin'ireo voalohany hanandrana Photoshop CC amin'ny iPad | Famoronana an-tserasera
Ny iPad dia mety saika handray Photoshop CC, ny fampiharana ho an'ity karazana fitaovana izay nandrasan'ny maro ity ary afaka namonjy ny alàlan'ny PC-na iMac-nao izy ireo mba hanaovana asa famolavolana.
Ary izany tokoa Adobe dia mitady mpizaha toetra hitsapana ny Photoshop CC ho an'ny Apple iPad. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tsy ela dia mety hiresaka momba ny fomba amin'ny asa maro azontsika atao mihoatra ny solosaina birao isika.
Ny tsy fananana programa toa ny Photoshop ho an'ny takelaka dia midika fa mbola ianao ihany tsy ny sehatra tonga lafatra ho an'ny mpamorona, famoronana… Ka ity dingana nataon'ny Adobe hanamafisana fa hamoaka kinova feno Photoshop CC ho an'ny iPad ity dia ho lasa aloha sy aorian'izay ho an'ny famoronana; ankoatry ny fidiram-bola be ho an'i Apple amin'ny fivarotana iPad-ny.
Miresaka momba izay azonao atao izahay amboary rakitra PSD amin'ny iPad miaraka amin'ireo fitaovana izay ampiasainay matetika amin'ny andiany feno an'ny Photoshop amin'ny solo-sainay. Mba hamoahana mialoha ireo fitsapana ireo dia azonao atao ny mandefa ny fangatahanao amin'izy ireo ho an'ny kinova beta an'ny Photoshop for iPad.
Adobe dia nampanantena fa hanana traikefa tena izy sy tanteraka isika Photoshop amin'ny takelaka Apple. Ho hitantsika raha ireo toetra rehetra ireo dia ho ny fandaharana izay hitantsika tato ho ato, na dia ho an'ny maro aza, ny fahatongavana amin'ny Photoshop tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ho ampy.
Afaka mandray anjara beta fitsapana Photoshop CC amin'ny iPad ianao dia tsy maintsy mandehana amin'ity takelaka ity. Izy io dia iray amin'ny Google izay tsy maintsy ampidirinao amin'ny data, fanontaniana ary andramo ny iray amin'ireo voafidy hitsapa an'ity programa ity amin'ny iPad-nao. Dingana iray natao mba hahitantsika azy tsy ho ela amin'ny rafitra hafa ary noho izany tsy fialan-tsiny ny fananana fitaovana tokana afaka mankafy tanteraka ny Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe dia mitady mpikaroka hitsapana Photoshop CC amin'ny iPad